Nisy ny fizarana T-shirt tamin’ny fanandramana ny tranonkalanay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 13:26 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, عربي, فارسی, Español, हिन्दी, English
(Marihina fa tamin'ny 24 Febroary 2014 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Raha namolavola ny tranonkalanay Global Voices izahay dia nangataka ny fanampian'ny mpamaky raha toa ka araka ny tokony ho izy izany. Naniry ny handre vaovao avy amin'ireo mpamaky, ny mpandray anjara, sy ireo namana izahay.
Nampiasa ny Global Voices ireo mpianatra avy ao amin'ny Oniversiten'i Washington sampana Human Centered Design and Engineering (HCDE) ho fandalinana amin'ny dingana fanandramana ny fampiasana ny tranonkala ao anatin'ny vondrona telo samihafa. Samy nanomana ny fanadihadiana nataony ny vondrona tsirairay.
Nangataka ny olona sasany hijery ny tranonkala sy ny hafa mba hijery ny famolavolana izany izahay amin'ny tranonkala vaovao. Afaka nisoratra anarana sy nandefa mailaka ireo izay naniry ny handray anjara.
Notoloranay T-shirt Global Voices izay olona tsara vintana !
Nisaorana ireo nanohana!